Waxaa markale fashilmay jadwalkii ay soo saareen Guddiga lagu muransanyahay ee doorashooyinka! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Xulshada Waxaa markale fashilmay jadwalkii ay soo saareen Guddiga lagu muransanyahay ee doorashooyinka!
Waxaa markale fashilmay jadwalkii ay soo saareen Guddiga lagu muransanyahay ee doorashooyinka!
Waxaa marka kale dib u dhac ku yimid jadwal doorasho oo ay soo saareen Guddiga doorashada dadban ee heer Federaal, kaas oo ay ku qeexneed xilliga loo qorsheeyay in ay dhacdo codaynta Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddiga lagu muransan yahay ayaa horay waxa ay u soo saareen jadwal doorasho 23-kii bishii December 2020, waxaana jadwalkaas uu dhigayay in Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo saaraan 29 December Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare, isla markaana 31 December 2020 illaa 6 Janaayo 2021 ay ku dhacdo doorashada Aqalka Sare.
Waxaa uu Guddiga qaatay codsiga, isagoo soo saaray jadwal labaad, kaasoo xeerinayay in doorashada Aqalka Sare ay dhacdo 7-14 Janaayo 2021, iyadoo maanta ay ku egtahay, hayeeshee waxyaabahaas aan waxba ka qabsoomin.
Xukuumadda Federaalka ayaa dhowaan shaacisay in doorashada la guda galayo, kaddib shir ay isugu yimaadeen Madaxda dowladda Federaalka iyo saddexda dowlad goboleed ee siyaasad ahaan u janjeera dowladda Federaalka, sida Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabelle.